FB: Oduu gara garaa – Amajjii 16, 2019 |
Home Afaan Oromoo FB: Oduu gara garaa – Amajjii 16, 2019
Ummnni maaliif WBO nuuf wayya jedhe?
WBOn madda nagaa fi tasgabbii ta’uun hubadhe
By G Hangaasuu, Amajjii 16, 2019
“Godina Horroo Guduruu wallaggaa aanaa Amuruu magaala Hagamsaa keessa yeroo xiqqoof waraanni WBO maandheffatani kan turan uummanis gammachuun isaan simatee nagaaf tasgabbiin uummata waliin jiraachaa ture darbee magaalaa keessatti miti naanno sana kiiramuu haga jaardaga jaarteetti nagaan uumataa buhee gammachuun waliin jiraacha ture hattuun magaala keessa kan suuqii mana kuusaa midhaanii cabsanii saama turan horii nama dallaadha baasani saama turan amma erga WBOn dhufee achi buuteen isaani dhabamee hirriba nagaa rafnee jiraanne jedhu jiraattoni. kanaaf waraanni WBO nagaa keenya fi qabeenya keenya eege; nagaan boqonne jedhani uummanni hedduun isaani kanaaf WBO nuuf wayya jedhu.
amma immoo erga waraanni wayyaanee dhufee rakkoo keessa jirra jedhu darbee loltoonni wayyaanee uummata aanaan hagamsaa wal gahii kaahanii gaafa gaafatani uummani sodaa tokko malee erga isini dhuftani saamichiif gudeeddiin dubartoota nutti hammaate jechuun isaanitti himani kanaaf hidhata irraa qawwee saamuun suuqi hatuun horii hatuun amma cime kanaaf hirriba dhabne rakkanne kanaaf WBO nuuf wayya jedhanii itti himani erga isin dhuftanii hattuun biyya saamtu sin waliin dhufte erga WBO dhufee garuu hattuun biyyaa baate ammas isin WBOtti lola bantu taanaan wal hin jaallannu jedhani yaada isaani sodaa takka malee ibsatani”
MM Dr Abiyyi ‘Code of conduct’ kan jedhamu akka partileen siyaasaa hundi karaa nagaan ykn hidhanno hikkannee hojjana jedhaanii mallatteesan Dr Birhaanu Naggaa akka qopheessu hojiin manaa itti kennameera.
Haaluma kanaan Dr Birhaanunis dikumentii kana qopheessa jiraachuun isaanii irra gameera. Kana jechuun ABO dhibbaan akka filanno irratti hin hirmaanne murteesuuf deemu.
ABO akka durii ala hin jiru mana ofii keessa jira. Ummata ofii wajjin jira. Wareegama barbaachisu cufaa kanfaluuf qophii ta’ee gale. Malee yoo haalli hammaate keessaa bayuuf hin galle biyya ofii fi ummata ofii keessaa gara itti bayus hin qabu. “Qabbanaa’u Harkaan yoo gube Faldhaan” kanuma kan ABO f WBOs. Waan Garaan keessan isin maddete cufa ta’aa sodaaf yaaddoo hin qabunu. Waan cufaa garuu nagaan akka caalu hin dagatinii
Dr . abiyyif Obboo Lammaan Edda Isin aangotti olbaataatanii quba qabeenya keessaniin Oromoo Jumlaan dhumaa ture fi Buqa’aa ture hin irraafatinaa sana cufaa ummanni oromoo otoo akka koosoo itti hadhaayuu liqimsee isinii obsee jira. Ammallee irra deebi’aatii of ilaalaa Akkanaan deemna Gara badii caalutti of oofaa jirtan.
Gochaan isin ummata oromoo irratti Raawwatan kan kaleessa TPLF wajjin ta’uun raawwachaa turtan dachaa dachaan caalee jira. Waanuma Dargiin mormitoota irratti gochaa ture sana fudhattanii sanumaan deemaa jirtani.
Irra deebi’aa of ilaalaa Ripheelolaa Ummata isaa keessa jiru Ummata isaa keessaa baaftee fixuun abjuudhaa .Nagaatu calaalaa seenas of hin balleessinaa G7 itti heerumtan kana otoo otoo isin irraa hin dhalin hiikaa Gara lammitti deebi’aa. Waancufaa Nagaatu caala.
Previous articleA Laboring woman on her way to hospital for delivery was killed by Ethiopian Army
Next articleEthiopia capital suffers fuel shortage as import route is blocked